43 အဘို့ရလဒ် simpsons
အ Simpson အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး
Bart Simpson တောအုပ်၌အံ့သြဖွယ်စွန့်စားမှုရှိတယ်, သူသစ်တောအတွင်းတိရိစ္ဆာန်များကယ်ဖို့လိုသည်။
အ Simpson အကျဉ်းထောင်ချိုး
Simpson အားလုံးအတားအဆီးလွန်ခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ arrow key ကို အသုံးပြု. အလမ်းအတွက်ဆုတံဆိပ်စုဆောင်းနေဖြင့်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်ပြေးကိုကူညီပါ။
Simpson Rambo ထောင်ပြီး
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Simpson တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့၏မြို့ကိုအပေါင်းတို့၌သူခိုးသည်မိမိမစ်ရှင်အပြီးသတ်ဖို့ရှိသည်။
မြားစှာသောသရဲတစ္ဆေရှိပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Simpson ဖမ်းမသွားပါစေပါဘူး, သူ့ကိုရေလွှမ်းမိုးသရဲတစ္ဆေလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးရန် ကျေးဇူးပြု. , Simpson လိုက်ရှာ။
ထိုမိကျောင်းဆန့်ကျင် Bart Simpson
သင်တစ်ဦး Bart Simpsons ရဲ့အိပ်မက်၌များမှာ! Monsters မဂ္ဂီ, Bart ရဲ့ညီမငယ်ပြန်ပေးဆွဲ။ မိမိအစကိတ်စီးပေါ် Bart သူတို့အပျေါမှာပြုံးဗုံးပစ်အားဖြင့်တစ်ဦးဖိုးပြုံးချိုလေးများသို့မိကျောင်းလှည့်။ ထိုမိကျောင်းကနေမဂ္ဂီကယ်ဖို့ကိုသူ၏လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှအတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန် Bart ကိုကူညီပါ။
Simpsons တစ္ဆေ Chase
သရဲတစ္ဆေကသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေသောကြောင့်သတိပြုရကြမည်, Simpsons မြို့လွတ်မြောက်ရန်နှင့်အတားအဆီးများရှောင်ရှားကိုကူညီပါ, သူတို့ကို Simpsons ဖမ်းမသွားပါစေပါဘူး။
အ Simpsons ထဲကနေအပေါငျးတို့သဇာတ်ကောင်များအကြားတစ်ဦး Motocross ယှဉ်ပြိုင်ငြင်း။ ဟိုးမား, Bart, Marge နဲ့ Lisa ပထမဦးဆုံး finish ကိုလိုင်းဖြတ်ကူးဖို့အရှိန်အဟုန်မြှင်အပေါင်းတို့နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
အ Simpson မရဏာနိုင်ငံ
ခြင်းတောင်းအပြောင်းအရွေ့ပေါ်မှာနှငျ့သငျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်နဲ့ခြင်းတောင်း hit မှကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်ကိုအောက်မေ့, သင်တတ်နိုင်သလောက်အများအပြားတောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါဟိုးမား Simpsons ကိုကူညီပါ။
ကန်သောမြည်း Homer 2
အဖြစ်ဝေးသူလုပ်နိုင်အဖြစ် Bart လင်းနို့ Homer ကိုကူညီပါပိုအကွာအဝေးအရအဆင့်မြှင့်တင်သုံးပါနှင့် Apu ရဲ့ Kwik-E Mart မှာအသစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်တို့၏ငွေသားသုံးပါဖို့မေ့လျော့ dont
သင်တို့အပေါ်မှာ Tipping မပါဘဲမျှမျှတတနေဖို့ဖို့ကြိုးစားအဖြစ်မီးရှူးမီးပန်းများဆိုင်ကယ်နှင့်အတူတောင်ကြီးတို့ကျော်စီး။
အ Simpson လေးသမား
Simpson ရဲ့အိပ်မက်၌။ သူဟာစူပါလေးသမားသည်။ သူ့ကိုအားလုံးလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများပြီးသွားကိုကူညီပါ။
အ Simpson စက်ဘီး
Simpson ကသူ့စက်ဘီးကို crashing မပါဘဲအပေါငျးတို့အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ဖို့တောင်ကုန်းများနှင့်အတားအဆီးများကျော်ကသူ့စက်ဘီးကိုစီးကိုကူညီပါ။
The Simpsons ဟယ်လိုခုန်
အသကြားလုံးဖမ်းပြီးအဖြစ်ကာလပတ်လုံးတစ္ဆေကနေကိုယ့်ကိုယ်ကို possible.Defend အဖြစ်ဘို့အသက်ချမ်းသာနေဖို့!
The Simpsons ပစ်ခတ်မှု
Bart Simpsons အမြဲတမ်းယုတ်ကလေးဖြစ်ခြင်းနှင့်စူပါတက်ကြွယခုမူကားသူသည်အခြားအဘယ်သူမျှမရိုက်ကူးမယ့်ရေသေနတ်အနိုင်ရခဲ့ကြောင်း Springfield ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူ့အစ်မ Lisa ကိုနှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသူအလေးတွေရနှင့်သူတို့၏ကိုယ်လက်သို့မဟုတ် bette သို့တရားမျှတမှုယူကူညီကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်
Bart ကသူ့စက်ဘီးပေါ်ပျော်စရာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏လမ်းအတွက်အတားအဆီးအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူ့ကိုကိုကူညီပါ။ တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်စိန်ခေါ်မှုများအတွက်အလယ်၌ရမှတ်များနှင့်စက်ဘီးစုဆောင်းပါ။
အရူးလှည့်ကွက်ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် Bart နှင့်အတူဘီအမ်အိပ်အပေါ်ကိုရယူပါ။ အဆိုပါပိုပြီး Flip နဲ့အကြီးအကျယ် position နဲ့ဆက်ဆံသင်ပိုကောင်းသငျသညျဂိုးသွင်းနှင့်သင်တို့ကိုရရှိလိမ့်မည်ပိုပြီးမှတ်လုပ်ဆောင်။
Bart Simpson အပေါငျးတို့သ Stuff စုဆောင်း Homer အားဖြင့်ဖမ်းရှောင်ရှားကိုကူညီပါ။
Bart နေသူများကဖန်တီးထားပါတယ် hes ကြောင့်ကိုယ်တော်တိုင်ဒါတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လုပ်သကဲ့သို့သူ၏ရထားဘီးတစ်နည်းနည်း wobbly ရှိပါတယ် ... အရမ်းကိုယ်ပိုင် Kart သည်နှင့်သင်သူ့ကိုအဆင့်ဆင့်၏အားလုံးဖြည့်စွက်ကူညီနိုင်လျှင်မြင်ရ, အခြို့ mayhem စေ Springfield ၏လမ်းများပေါ်ထွက်သည် သော။
Bart Simpson စွန့်စားမှု
Simpson အဆင့်တိုင်းအတွက်အပေါငျးတို့သဒိုးနက်စုဆောင်းဖို့ကိုကူညီပါ။ ကျောက်ဖို့အဆင်သင့်ရပြီးတော့, သူငယ်ချင်းကြိုက်နှစ်သက်သောအကြိုက်ဆုံး tools တွေကိုရွေးကောက်သဖြင့်, အတားအဆီးများနှင့်မိကျောင်းကိုရှောင်ရှားဖို့သေချာပါစေ။ လမ်းတစ်လျှောက်ရှိသမျှကိုဒိုးနက်ကိုစုဆောင်း, သူတို့ကလည်းသင်ပိုမို enegy အားငါပေးမည်။
Bart နေသူများကဖန်တီးထားပါတယ်အရမ်းကိုယ်ပိုင် Kart သည်နှင့်သင်သူ့ကိုအဆင့်ဆင့်၏အားလုံးဖြည့်စွက်ကူညီနိုင်လျှင်မြင်ရ, အခြို့ mayhem စေ Springfield ၏လမ်းများပေါ်ထွက်သည် ...
Bart ကသူ့စကိတ်စီးယောက်ျားသည်နှင့်အတူဖြစ်သူ၏လမ်း hes အပေါ်မုစုဆောင်း, ဖန်ဆင်းသောအရာကို hes Springfield ၏လမ်းများဖြင့်ပေါ်ထွက်သည်။ အကြှနျုပျ၏ဇာတ်လမ်းတိုကိုစား!
ဆိုင်ကယ်2ရက်နေ့တွင် Bart
Bart ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုင်ကယ်စွန့်စားမှုပြီးနောက်သူတစ်ဦးဒုတိယစွန့်စားမှုအပေါ်ကိုယ်တော်တိုင်ပြင်ဆင်နေသည်။ သူကသူ့အိမ်နောက်ဖေးမှာလေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်အနေအထားများကိုပြုပြင်။ သငျသညျမိမိအလာမည့်စွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့်ရတဲ့နှင့်အတူ Bart ကူညီပေးနိုင်ပါသည်
The Simpsons jigsaw ပဟေဠိ
9 ကွဲပြားခြားနားသောအ Simpsons ဓါတ်ပုံတွေကနေရှေးခယျြပါထို့နောက် jigsaw ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်။
Bart ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုကယ်နှုတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, သို့သော်ဤလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်။ Becareful သင်လာမည့်အဆင့်အထိလုပ်မည်မဟုတ်မဟုတ်ရင်အလွန်အကျွံပစ္စည်းပစ္စယမဆုံးရှုံးပါဘူး။
မိမိအဘီယာစုဆောင်းနှင့်အတူဟိုးမားကိုကူညီပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုရပ်တန့်ချင်သောလူများနှင့်ရေတံခွန်ထွက်သည် watch!
ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကကောင်းစွာရည်ရွယ်ထားပြီးကောင်းသောသစျပငျစောငျ့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးစနိုက်ပါနေနှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှအပေါငျးတို့သဖုတ်ကောင်ဖယ်ရှားပစ်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်! , ရည်ရွယ်ခြင်းနှင့်ပစ်သတ်ရန်အ zoom ကိုများအတွက် space bar ကိုသင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပါ။
သူတို့အပျေါမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကဒ်များအားလုံးကိုက်ညီကိုရှာပါ။ အသီးအသီးပွဲစဉ်များအတွက်သင်က 100 မှတ်ရ။ နောကျအဆငျ့သို့သွားကြဖို့အချိန်ကြာချိန်အတွင်းကဒ်ပြားအားလုံးအားလုံးကိုက်ညီ။
Super Mario စိန်ခေါ်မှု
အဆိုပါစူပါမာရီယိုခုန်သင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့အများအပြားဒင်္ဂါးပြားရဖို့အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကတခြားပလက်ဖောင်းတခြမ်းကနေလမ်းလျှောက်နေသောရန်သူများကိုထွက်သည်ကိုစောင့်ကြည့်ရပေမည်။ ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားဘို့စင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနိုငျသောသေတ္တာများကိုယူပါ။
ဂြိုလ်သားရုတ်တရက် Gotham မြို့ပေါ်မှာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာအံ့သြတိုက်ခိုက်မှုကိုဖွင်! Batman တပါးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏လှိုင်းတံပိုးမှတဆင့်မိမိသွားသောလမ်းကိုဖြစ်စေတပါး Boss ကိုဖကျြဆီးကူညီပါ!
ben 10 ပြိုင်ကားကြယ်ပွင့်
ဘင် 10, ကျောအချိန်ဆန့်ကျင်လူမျိုးဖြစ်ပြီး .. ဒါ့အပြင်သင်မီးသတ်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်စိန်ဦးခေါင်းကိုသို့သင်တို့၏ ben10 ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဆုကြေးငွေအချက်များနှင့်အာဏာအာ့ကိုစုဆောင်းပါ။ ခံစားကြည့်ပါ!
၎င်း၏ Zombie သင့်ရဲ့ဖုတ်ကောင်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်လေးဖုတ်ကောင်များနှင့်လူမျိုး၏တစ် Time.Choose သူတို့နှင့်ရိုက်တယ်။ မြန်သင်တတ်နိုင်သလောက်သင့်ရဲ့စက်ဘီးစီးစီအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်ပထမဦးဆုံးပြီးအောင်။